ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၎ အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ ၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ ဆည်းပူး ပါတီစုံ အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ Choosတွင်g AOX ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl choice.We လိမ့်မည် ဖြစ် hတစ်ဦးppy သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် quတစ်ဦးlity ကုန်ပစ္စည်းs နှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု။
Power: AC85 265V, AC380V, AC / DC24V ပေါင်းစုံပါဝါ input ကို,
AC အ 220V / 110V / AC အ 24V / DC က 24V တစ်ခုတည်းပါဝါ input ကို။
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: -20â ~ 70â။
2. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံ၏မော်တာလျှပ်စစ် actuator လှည့်အမြင့်ဆုံးစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
3. ရိုးရှင်းသောလက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ: AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံ၏လက်စွဲစစ်ဆင်ရေးလျှပ်စစ် actuator turn Spanner နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ITA, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving ့။
4. အရောင်ရွေးချယ်မှုများ၏မတူကွဲပြား: နျ Standard အရောင်ကမီးခိုးရောင်နဲ့ bule ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဒီဘာဂင်မြန်ပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator turn လျှပ်စစ် cam ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းသို့လေး cams ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်လိပ်ပြာနွေဦးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ အထက်ပိုင်းတစ်သော့ခတ်ခွံမာသီးတွေနဲ့နှိပ်သည်တစ်ဦးဝင်ပေါက် potentiometer အသုံးပြုသည်။
AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံ၏ထိန်းချုပ်မှုလိုင်းလျှပ်စစ် actuator turn Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာနှင့်မျဉ်း layout ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
1997 ခုနှစ်မှစ. AOX ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာထူထောင်ထားပြီးလျှပ်စစ် actuator turn AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတပုံများအတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, တက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနဌာနနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်မားသောနည်းပညာအခွက်မိတ်ဆက်နှင့်မိတ်ဆက် အဆင့်မြင့်ကိရိယာများ။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်အများဆုံးကျေနပ်ထုတ်ကုန် (AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator turn) နဲ့အသုံးပြုသူများအပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့, etc ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဝန်ဆောင်မှုမှထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဝယ်ယူရေးအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခိုင်ခံ့စေပြီ ISO9001 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီတစ်ဦးချင်းစီလင့်ခ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတည်ထောင်ခဲ့သည်။
AOX ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 60,000 AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတစ်ပုံတစ်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်လျှပ်စစ် actuators လှည့်နှင့်အတူက, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားလေးပုံတပုံပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany အမည်ဖြင့်လျှပ်စစ် actuators သို့မဟုတ်အထုပ်ကိုဖွင့်ရနိုင်မလား?
မေး: လျှပ်စစ် actuators turn AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားသုံးလပတ်မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်